ကတိတည်တတ်ပါစေ – Live the Dream
“ကတိပေးပါတယ်” ဆိုတာမျိုး ပြောခဲ့ဖူးလား။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကတိတွေတော့ အကြိမ်ကြိမ် ပေးခဲ့ဖူးတယ် မို့လား။ ဟုတ်ပါတယ် ဒါလူတိုင်းလိုလို လုပ်နေမိကြတဲ့ အရာတစ်ခုပါပဲ။ ဒါဆိုရင် တစ်ခုလောက် ထပ်မေးကြည့်ရအောင် ကတိတွေ ပေးခဲ့ဖူးသလောက် ဘယ်နှစ်ခါ ကတိတည်ခဲ့ဖူးလဲ။ ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ကိုယ့်ကို တစ်ယောက်ယောက်က ကတိပေးခဲ့ပြီးမှ ကတိမတည်ရင် သိပ်ဒေါသထွက်တယ်မို့လား။ ကျွန်တော်လည်း လုံးဝမကြိုက်ပါဘူး။ သူများကတိမတည်ရင်ကျ ဒေါသထွက်ပြီး ကိုယ်တိုင်ကရော ကတိတည်တဲ့သူတစ်ယောက်လား။ ပြောရရင် ခုနောက်ပိုင်း လူတွေက ကတိတွေ လွယ်လွယ်ပေးကြလွန်းတော့ ကတိဆိုတာရဲ့ လေးနက်မှုတွေတောင် ပျောက်ဆုံးနေပါပြီ။
ကျွန်တော်လည်း ကတိနဲ့ ပက်သက်ရင် ပြဿနာအကြီးကြီး တက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ငယ်ငယ်တုန်းက မိဘတွေ ကိုယ့်ကို အတန်းထဲမှာ အဆင့်တစ်ရရင် ဘာပေးမယ်တို့၊ ဖေဖေခရီးသွားရင် ဘာလေးလက်ဆောင် ပါလာမယ်ဆိုပြီး ကတိပေးခဲ့တာတို့ အဲလိုမျိုးလေးတွေပေါ့။ ငယ်တုန်းမို့ဆိုပေမယ့် ကတိလေးတွေက သေးငယ်တယ်ဆိုပေမယ့် အဲ့တုန်းက မိဘတွေပေးခဲ့တဲ့ ကတိတိုင်းကို အရမ်းမျှော်လင့်ခဲ့တာပါ။ သူတို့ တကယ်ကတိတည်မယ်လို့လည်း လုံးဝယုံကြည်ခဲ့ဖူးတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ထင်သလို ဖြစ်မလာခဲ့ဘူး။ အါ့ကြောင့် အဲ့ဒါတွေနောက်ပိုင်း ကျွန်တော် မိဘတွေကို မယုံတော့ဘူး ဖြစ်လာတယ်။ တခြားသူတွေကိုလည်း မယုံတော့ဘူး ဖြစ်လာတယ်။ ကတိတွေ ပေးကြပြီး တည်မှ မတည်ကြတာကိုး။ ကျွန်တော့်မျှော်လင့်ချက်တွေကို အကုန်လုံး ရိုက်ချိုးခဲ့ကြတာလေ။ ကျွန်တော်ဘယ်ယုံတော့မလဲ။ ဒါပေမယ့်လည်း ကြီးလာတော့ တဖြည်းဖြည်း နားလည်လာပါတယ်။ ဆိုတော့ အခုဆိုရင် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ကတိတည်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ပဲ အကောင်းဆုံး ကြိုးစားတော့တယ်။
ဒီလိုပါပဲ ကတိဆိုတာက မျှော်လင့်ချက်တွေပါ၊ ယုံကြည်ချက်တွေပါ။ ကတိပေးပြီးမှ မတည်ဘူးဆိုရင် တစ်ဖက်လူရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေ အကုန်လုံးကို ရိုက်ချိုးလိုက်သလိုပါပဲ။ ကတိမတည်တာ များလာပြီဆိုရင် ဘယ်သူမှလည်း ကိုယ့်ကို ယုံတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ယုံကြည်မှုဆိုတာလည်း ကတိအပေါ် အခြေတည်တာ မို့လား။
ဒီတော့ ကတိနဲ့ ပက်သက်တာလေးတွေ နည်းနည်း ပြောကြည့်ရအောင်နော်။
၁. တကယ်မလုပ်နိုင်တာကို ကတိမပေးနဲ့
တစ်ချို့က ကိုယ်တကယ်လည်း လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ တာဝန်တွေ အကြီးကြီးယူပြီး ကတိတွေ အထပ်ထပ်ပေးကြတယ်။ ဒါတကယ်မကောင်းပါဘူး ကိုယ်မလုပ်နိုင်တာမျိုးဆို ဘယ်တော့မှ ကတိမပေးပါနဲ့။ မလုပ်နိုင်ရင်၊ အရမ်းတာဝန်ကြီးရင်၊ ကိုယ့်အတွက် ခက်ခဲနေရင် မလုပ်နိုင်တာကို မလုပ်နိုင်ကြောင်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲ ပြောပါ။ ကတိမတည်တဲ့သူ ဖြစ်မှာထက်စာရင်တော့ ဒါအများကြီး ပိုကောင်းပါတယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ့်အတွက် အရမ်းဝန်ပိလွန်းတာကိုလည်း အတင်းကြီး လုပ်ဖို့ မကြိုးစားပါနဲ့။ ကိုယ့်အတွက်လည်း မကောင်းပါဘူးနော်။
အင်း လျှာဖျားလေးနဲ့က ပြောဖို့သိပ်လွယ်ပါတယ်။ ကတိကို လွယ်လွယ်ပေးလိုက်မိဖို့လည်း သိပ်လွယ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီနောက်ကွယ်က တာဝန်ယူမှုဆိုတာကတော့ တကယ့်ကို ကြီးမားတဲ့ တာဝန်ပါ။ ပြီးတော့ ကိုယ့်ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့လည်း ဆိုင်ပါတယ်။ ကတိတွေ လွယ်လွယ်ပေး တစ်ဖက်လူကို မျှော်လင့်ချက်တွေ ပေးပြီးမှ မတည်နိုင်တာမျိုးဆို တစ်ဖက်လူအတွက်လည်း အရမ်းကို နာကျင်ရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ပြောလို့လွယ်တိုင်း ကတိကို လွယ်လွယ်မပေးမိပါစေနဲ့။ ကတိတွေ မပေးခင် အရင်ဆုံး သေချာစဉ်းစားစေချင်ပါတယ်။ ကိုယ်ဘာပြောနေလဲဆိုတာ သေချာဂရုစိုက်ပါနော်။ ကိုယ်ပြောသမျှတွေကို နောက်ဆုံး ကိုယ်တိုင်ပဲ တာဝန်ယူရမှာ မို့လို့ပါ။
၃. ကတိဆိုတာကို တန်ဖိုးထားပါ
ကတိဆိုတာ အရမ်းကို တန်ဖိုးကြီးတဲ့ အရာပါ။ “မင်းမှာ သစ္စာ၊ လူမှာ ကတိ” ဆိုတာတောင် ရှိသေးတယ် မို့လား။ ဒီစကားပုံက အလကားပေါ်လာခဲ့တာမှ မဟုတ်တာလေ။ ကဲ ကိုယ်က ကတိတွေပေးတယ် ဒါပေမယ့် တည်နိုင်တာ နည်းတယ်ထား။ လူတွေက ကိုယ့်ကို ဘယ်လိုမြင်မလဲ၊ ဘယ်လိုပြောကြမလဲ။ သူက ကတိမတည်ဘူး ပြောတဲ့စကားလည်း မတည်ဘူး ဆိုတာမျိုးပဲ ဝေဖန်ကြမှာပါ။ အကြီးမားဆုံးအနေနဲ့ ယုံကြည်မှုတွေတောင် ဆုံးရှုံးသွားနိုင်ပါတယ်။ ကိစ္စသေးသေးလေးမှာ ကတိမတည်တဲ့သူကို ကိစ္စ အကြီးကြီးအတွက် ဘယ်သူကများ သူ့ကတိစကားတွေကို ယုံတော့မှာတဲ့လဲ။ အကျိုးသက်ရောက်မှုက ဒါပါပဲ။ ဒီကတိဆိုတာလေးက ကိုယ့်ဘဝနဲ့ပါ သက်ဆိုင်နေတာမို့လို့ ပေါ့ပေါ့မတွေးပါနဲ့ တန်ဖိုးထားပါနော်။
၄. ခိုင်လုံတဲ့ အကြောင်းအရင်း
မှန်ပါတယ် ဘယ်သူမဆို အချိန်တိုင်း ကတိတည်နိုင်ဖို့တော့ ခက်ပါတယ်။ ဘယ်အချိန်မှာ ဘာတွေ ကြုံရမယ်ဆိုတာ မသိနိုင်ဘူးလေ အနာဂတ်ကိုမှ ကြိုမမြင်နိုင်တာ။ ဆိုတော့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် လာမယ်ကတိပေးထားပေမယ့် မလာနိုင်တော့တာမျိုး၊ လုပ်မယ်ပြောထားပေမယ့် မလုပ်နိုင်တော့တာမျိုး အဲ့လိုမျိုး ကတိတည်ဖို့ မဖြစ်နိုင်တာတွေ ရှိတတ်တယ်လေ။ ဒါလူတိုင်းကြုံနိုင်တဲ့ ကိစ္စပါ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်က ကတိပေးထားပြီးသားမို့လို့ ကိုယ့်ကတိအတွက် တာဝန်ယူမှုတော့ ရှိရပါမယ်နော်။ တကယ်လို့များ အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် ကတိတွေ ပျက်ဖို့ အကြောင်းဖန်လာခဲ့ပြီဆိုရင် ဘာကြောင့် ကတိမတည်နိုင်တာ၊ ဘယ်လိုကိစ္စကြုံခဲ့လို့၊ ဘာဖြစ်လို့ ဆိုတာမျိုး ခိုင်လုံတဲ့ အကြောင်းအရင်းပေးပါနော်။ တစ်ဖက်လူက ကိုယ့်ကတိကို ယုံကြည်ထားတာမို့လား။ အဲ့တော့ ခိုင်လုံတဲ့ အကြောင်းအရင်းနဲ့ တာဝန်ယူမှုလေး ရှိနေပါစေနော်။
လေကျယ်တာ မဟုတ်ပါဘူး ကိုယ်က ဖော်ရွေတာပါ၊ ပေါတာပါ ဆိုတာမျိုး ပြောမယ်တော့ မကြံပါနဲ့။ ဖော်ရွေတာတွေ၊ ပေါတာတွေနဲ့ အာကျယ်တာက ကွာတာမှ အသိသာကြီးပါ။ တစ်ချို့က ရှိပါတယ် မလုပ်နိုင်တာတွေလည်း အကြီးကြီးတွေပြော၊ သူများတွေကို လိုက်ကတိပေးပြီး အာကျယ် အာကျယ်နဲ့ တကယ်လည်း ပြောတာတွေကို တာဝန်ယူနိုင်တာမဟုတ်ဘူး။ စကားသက်သက်ပဲလေ ကတိမှ မဟုတ်တာလို့ တွေးရင်တွေးမိနိုင်ပါတယ်။ ကတိဆိုတာ ကိုယ့်ရဲ့စကားပါ။ ဒါ့ကြောင့် ကိုယ်ပြောတဲ့ စကားလုံးတိုင်းက အရေးကြီးပါတယ်။ ကိုယ့်စကားကြောင့် တစ်ဖက်လူ ထိခိုက်တာမျိုး ဖြစ်နိုင်သလို၊ တစ်ဖက်လူအကျိုးလည်း ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ပြောပြီးသားစကားဆိုတာက ပြန်ရုတ်သိမ်းလို့ မရတာမို့ လေမကျယ်ပါနဲ့။ ပြောတဲ့စကားတွေကို သတိလေးကပ်ပါနော်။
ဘယ်သူမှ ကတိမတည်တဲ့သူကို မကြိုက်ကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကတိတည်ဖို့ ဆိုတာတော့ တကယ်ခက်ခဲပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒီလိုခက်ခဲမှုတွေနဲ့ပဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကျင့်တရားနဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ ဂုဏ်သတင်းဆိုတာတွေကို တည်ဆောက်ရတာပါ။ ဒါ့ကြောင့် ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် တတ်နိုင်သလောက်တော့ ကတိတည်ဖို့ ကြိုးစားပါ။ ကတိတည်တဲ့သူ တစ်ယောက်က တကယ်ကို တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ ဒါလည်း ကိုယ့်တန်ဖိုးကို မြှင့်ခြင်းပါပဲ။ ဒါတွေအားလုံးက ကိုယ့် Image ဖြစ်နေတာမို့ နောက်တစ်ယောက်ယောက်ကို ကတိပေးမယ်ဆို မပေးခင်သေချာစဉ်းစား ပေးပြီးရင်လည်း တည်ဖြစ်အောင် တည်ပါနော်။
အားလုံးပဲ ကတိကို တန်ဖိုးထားပြီး ကတိတည်နိုင်သူတွေ ဖြစ်ကြပါစေ။